Nepal Deep | देउवाको रणनीति: निधिलाई रोक्न श्रेष्ठ, श्रेष्ठले भने- हाम्रो टिमबाट देउवाले छोडे म नै हो
काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिनु अगावै नेपाली कांग्रेस भित्र महाधिवेशन केन्द्रीत सरगर्मी सुरु भइसकेको थियो। कांग्रेसका नेताहरुले सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका थिए। त्यसपछि ठ्याक्कै डेढ वर्ष कोरोना कहरले कांग्रेसको महाधिवेशन रोकियो।
तर संवैधानिक प्रावधानले नै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन यही भदौमा जसै गराउनु पर्ने बाध्यता भएपछि नेताहरु महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर दौडधुप सुरु गरेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन केन्द्रित तयारी थालेपछि पार्टीमा एकाएक तरंग आएको छ। संस्थापन पक्ष देखि लिएर संस्थापन इतर पक्षमा देउवाको उम्मेदवारी घोषणाले कम्प पैदा गरेको छ।
१३ औं महाधिवेशन जस्तो सहज देउवालाई १४ औं महाधिवेशन नहुने प्रष्ट छ। महाधिवेशनको रौनक बढे सँगै नेतृत्वका आकांक्षीहरु मुखरित हुन थालेका छन्। संस्थापन पक्षबाट शेरबहादुर देउवा एक मात्र प्रतिष्पर्धी हुने सम्भावना न्यून हुदै गएको छ।
संस्थापन पक्षका नै दरिलो खम्बा मानिने विमलेन्द्र निधिले शक्तिकेन्द्रहरुको समर्थनमा सभापतिमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि देउवालाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ। निधि महामन्त्री बनिसके। उपसभापति छँदैछन्। अबको उपल्लो तह भनेकै सभापति हो। १४औं महाधिवेशनमा उनले सभापति बन्न सकेनन् भने १५औं उनका लागि अनुकुल नहुने उनले बुझेका छन्। त्य्सैले उनि यसपाली जसरी पनि सभापतिको उम्मेदवार हुने प्रयास गर्ने छन्।
निधिले आफू सभापतिको उम्मेदवार भएको कुरा डेढ वर्ष अघि नै राखेका थिए। त्यतिबेला देउवाले १४ औ महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गरे १५ औ महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट निर्विकल्प उम्मेदवार हुन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि कोरोना कहरले रोकिएको उनीहरुको संवाद केही दिन अघि फेरी भयो। तर देउवाले निधिलाई आफूले सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिए।
उक्त कुराकानीबारे निधि भन्छन्, ‘हो, म सभापतिको उम्मेदवार हुँ। मैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक/डेढ वर्षअघि नै भनिसकेको थिएँ। मैले सोचेको थिएँ, उहाँले मेरै लागि पहल गर्नुहोला। तर, उहाँले आफ्नै लागि लबिङ सुरु गर्नु भएको छ। शनिबार प्रदेश दुईका केन्द्रीय सदस्यसहितको छलफलमा मैले उहाँलाई भने, म यसपटक लड्छु, मलाई तपाईंको समर्थन, आशिर्वाद चाहिन्छ। तर उहाँले भन्नुभयो- तपाईंको अधिकार छ लड्नुस्, म पनि लड्छु, भन्नु भयो।’
डेढ वर्ष अघिको त्यो भेटमा उनले १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने मनस्थिति बनाएको कुरा निधिले सुनाए। प्रतिउत्तरमा देउवाले उल्टै १४ औं महाधिवेशनमा पनि आफू नै उम्मेदवार बन्ने र सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले १५औं महाधिवेशनमा ‘हाम्रो समूहबाट तपाईं निर्विकल्प सभापतिको उम्मेदवार’ भएको भन्दै निधिलाई फकाउने प्रयास समेत गरे।यस्तै किसिमको वचन देउबाले तेह्रौं महाधिवेशनमा पनि दिएका रहेछन निधीलाई। उसो त बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले पनि आफूलाई १४ औं महाधिवेशनमा देउवाले सभापति हुन सहयोग गर्ने वचन दिएको बताउदै आएका छन्।
देउवाका वचन राजनैतिक तिकडमबाजी हुन भन्ने कुरा उनकै सहयोगीले नबुझ्ने कुरै भएन। त्यसैले निधिले त्यस्तो नभन्न आग्रह गरे। १५ औं महाधिवेशन सम्म आफूलाई उमेरले साथ नदिने भएकोले नै यहिँ महाधिवेशनमा उठ्ने मनस्थिती बनाएको बताए।
निधिले देउवालाई १३औं महाधिवेशनका कुराहरु स्मरण गराउने प्रयास गरेका थिए। तर देउवा टसमस भएनन्। एकदमै भावनात्मक किसिमले हिड्ने बेलामा ‘सभापति त म तपाईको नै समर्थनमा हुन्छु,’ भनेछन् निधिले। देउवा मौन भएछन्।
निधिले सभापति देउवा पटक-पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको सभापति पनि भइसकेकोले यसपटक नयाँ नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुरजी पार्टी सभापति पनि भइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो। उहाँले पार्टी र देशलाई दिन सक्ने जे थियो, दिइसक्नुभयो। उहाँको योगदानलाई प्रेरणादायी रुपमै लिनुपर्दछ, प्रशंसा गर्नुपर्दछ। तर आजका दिनमा पार्टी, मतदाता र देशका लागि नयाँ जेनेरेशनले बढी दिनसक्छ, यो बढी प्रभावकारी हुनसक्छ।’
कस्तो छ त निधिको शक्ति?
निधिले सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने धारणा हवाई किसिमले गरेका होइनन। उनले धेरै नै सोचेर सम्झेर नै त्यो निष्कर्षमा पुगेका हुन्। के आधारमा उनले देउवालाई च्यालेन्ज गर्ने निधो गरे त?
पहिलो, उनि लिगेसीबाट आएका नेता हुन्। गान्धीवादी नेता भनेर चिनिने महेन्द्र नारायण निधिका छोरा हुन बिमलेन्द्र। त्यसैले पनि उनलाई मधेश तिर सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो। उनको सबै भन्दा मजभूत शक्ति भनेको नै त्यहिँ हो।
नेपाली कांग्रेसका तराईका धेरै नेताहरुले मधेश आन्दोलनको समयमा पार्टी परित्याग गरेपछि एक समय निधिको मधेशमा एकछत्र प्रभाव थियो। तर मधेशी मुद्धाहरुको बारेमा केहिँ आवाज नउठाएको, धार्मिक आस्था विरुद्द बोलेको र जानकी मन्दिरमा भएको अयोध्या-जनकपुर रथ यात्राको बेला कटुवचन बोलेको भन्दै अहिले निधीको मधेशमा नै आलोचना हुन थालेको छ। पहिले जति उनि मधेशमा शक्तिशाली थिए अहिले उनको त्यस किसिमको शक्ति छैन। विजयकुमार गच्क्षदारको पार्टीमा पुन: आगमन पछि उनलाई अवश्य केहिँ धक्का लाग्ने नै छ।
अर्को तर्फ कांग्रेसकै बौद्धिक नेता भनिने प्रदीप गिरि उनलाई सभापति बनाउन लागेका छन्। उनि सभापतिमा निधिलाई अघि सारेर महामन्त्रीमा गगन थापासहितको समीकरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। पितातन्त्रका प्रखर आलोचक, कोइरालाहरुले परिवारतन्त्र चलाएको आरोप लगाउने गिरिले कुन नैतिकताले निधिलाई समर्थन गरेका छन् त्यो भने आफैमा अच्चमको विषय भएको छ। उनि यसपाली देउबालाई निरन्तरता नदिने पक्षमा छन्।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा आन्तरिक शक्ति संरचना, सहयोग, वाचा बन्धनका अतिरिक्त भारतीय भूमिकाको पनि उतिक्कै प्रभाव हुने गरेको पछिल्ला महाधिवेशन पछिका चर्चाले प्रष्ट पार्छ। तर भारतमा भएको शक्तिमा फेरबदल र कांग्रेस आई कमजोर भएको हुनाले पश्चिमी छिमेकीको शक्ति विमलेन्द्रलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। उनि अहिलेको भारतीय संस्थापन भन्दा पनि कांग्रेस आईसंग निकट रहेको बताइन्छ। उनले सोहिँ इन्ट्रेष्टमा काम पनि गरेका छन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणको विरोध गरेर कांग्रेस आईप्रति आफ्नो वफादारी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। अर्को तर्फ बिमलेन्द्र धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको वकालत गर्ने नेता हुन्। जुन कुरा अहिलेको मोदी नेतृत्वको सरकारले रुचाउदैन।
स्रोतका अनुसार भारतीय पूर्व संस्थापनको इन्ट्रेष्टमा नेपालमा काम गर्ने गिरिले उतैको सल्लाह अनुसार निधिलाई अघि सारीरहेका छन्। निधि र गगन नआएको खण्डमा भारतीय पूर्वसंस्थापन कांग्रेस आईको नजिक रहेको रअको समूहले आफूले स्थापित गरेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संकटमा पर्ने देखेको छ। अर्को तर्फ अहिलेको संस्थापनले यो व्यवस्था नै नेपालको लागि घातक भएको भन्दै राजा सहितको हिन्दूराष्ट्रमा परिवर्तन गर्ने लामो योजना सहित नेपाल भित्र सक्रिय छ। त्यसो हुदा पनि बिमलेन्द्रलाई जसरी पनि सभापतिमा उठाउने चाहना देखिन्छ भारतिय पुर्व संस्थापनको।
विमलेन्द्र भने सभापति शेरबहादुर देउबालाई दबाब सिर्जना गर्न अहिले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन्। देउवाको छवि अहिले खस्केको र उनको नेतृत्व कसैले स्वीकार नगर्ने कुरा बुझेका बिमलेन्द्रले सो अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। गुट भित्रै पनि देउवाको नेतृत्वबाट अघाएकाहरु धेरै छन्। जसले गर्दा विमलेन्द्रले देउबालाई साइड लगाएर सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
अहिलेपनि निधि आफ्नो टिमबाट एकल उम्मेदवार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सकेसम्म देउवालाई सभापतिबाट ब्याक गर्ने उनको प्रयास हुनेछ। देउवाले स्पष्ट सहयोग गर्न नसकिने कुरा गरेपछि निधिले भनेछन्- ‘मैले जवाफमा भनेको छु,- लड्ने अधिकार छ भन्नुभयो, त्यो अधिकार त छँदैछ, तर तपाईंसँग मेरो लामो सम्बन्ध छ। नेविसंघदेखि आजका दिनसम्मको सम्बन्धका आधारमा म सभापतिमा लड्दा तपाईंको समर्थन प्राप्त गर्ने पनि मेरो अधिकार हो।’
उता किशुनजी शक्तिमा हुदा सत्ता र पार्टीमा ‘डाडु-पन्यू’ रिगाएका गिरि देउवालाई पछि हट्न दबाब दिईरहेका छन्। देउवालाई टिम भित्रै गल्याउन सक्ने कोहिँ छ भने ति व्यक्ति प्रदिप गिरि नै हुन्। उनलाई नाइँ भन्न सक्ने आट कोहिँ गर्न सक्दैनन्। अब उनको रणनीति भनेको देउबा टिमको एकल उम्मेदवार निधिलाई बनाउने हुन्छ।
निधिलाई तह लगाउने देउवाको अस्त्र- गोपालमान
निधि यो विधिसम्म जाने छन् भन्ने कल्पना देउवाले गरेका थिएनन्। तर अब जसरी नि उठ्छु भनेको खण्डमा उनलाई तह लगाउने तरिक देउवाले सोची सकेका छन्। टिमबाट नै एकल उम्मेदवार बन्ने दाउमा रहेका बिमलेन्द्रलाई काउण्टर गर्न देउबाले आफ्नो समूहका अर्का ‘हेभी वेट’ नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रयोग गर्ने देखिएको छ।
डेढ वर्ष अघि पनि निधिले देउवा समक्ष आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने जानकारी गराएको केहि दिन पछि नै श्रेष्ठले आफू [अनि उम्मेदवार रहेको बताएका थिए। आफूलाई सभापतिमा समर्थन गर्न निधिले आग्रह गरे लगत्तै देउवाले पार्टी फुटाउँदादेखि साथ दिएका पूर्वउपभापति श्रेष्ठले सभापतिमा आफ्नो पनि दाबी गरेका थिए। अहिले उनी कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख छन्। उनले देउबा नउठेको खण्डमा आफू स्वाभाविक टिमबाट दाबेदार रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
‘एक्लै उठेर हुन्न टिममा सल्लाह गर्नुपर्छ। हाम्रो टिम लिडर देउवा हो। उहाँले म उठ्दिनँ भन्नुभयो भने स्वभाविक रूपमा म नै सभापति उठ्ने हो,’ उनले भनेका थिए।
उनले दाबी मात्र गरेनन निधि प्रति लक्षित गर्दै मिडियामा उत्रिए। उनले आफू अरु जस्तो ‘नेता पुत्र’ नभएको बरु दुख गरेर आएकोले निधिको ठाउँमा आफू हुनु पर्ने दाबी गरेका थिए। ‘देउवालाई अप्ठेरो पर्दा मैले गुन लगाएको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘म भुइँदेखि दु:ख गरेर आएको नेता हुँ। यति मात्रै हो म नेता पुत्र भइनँ।’
उनले निधि आफू पछिको भएको बताए। देउवा उठ्दिन भनेको खण्डमा मात्र अरुले मौका पाउने उनको तर्क थियो। ‘यदि देउवा नउठे दोस्रोमा म र त्यसपछि निधिलगायत नेता हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘शेरबहादुरले छाड्दा मलाई सभापति उठ्न दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। उहाँलाई धर्मसंकट पर्दा मैले नै सफल बनाएको हुँ।’
देउवा समूहमै रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि सभापति उठ्ने चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रजातान्त्रिक पार्टीमा जसले पनि इच्छा राख्न पाइए पनि टिमको कुरा निर्णायक हुने बताएका थिए। सिनियारीटी पनि हेर्नु पर्ने उनको तर्क थियो।
लगभग डेढ वर्ष पछि त्यहिँ घटनाक्रम दोहोरियो। उपसभापति निधिले देउवालाई चुनौती दिँदै आफू सभापति उम्मेदवार बन्ने औपचारिक रूपमा बताएको भोलिपल्ट आइतबार संस्थापन पक्षका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दावी गरेका छन्।
देउवाले फेरि सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्न डाकिएको जानकारी भएपछि आफू नगएको श्रेष्ठले बताए। ‘शेरबहादुरजीले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्नकै लागि बैठक राख्नु भएको रहेछ। हिजो (शनिबार) बिमलजीले पनि आफू सभापतिको उम्मदवार रहेको भनेर दावी राख्नुभयो। मैले ६ महिनाअघि नै सभापतिजीलाई भेटेरै अब मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेको छु। अहिले त्यही कुरा राख्न किन जाउँ भनेर म गइनँ।’
पार्टी विभाजित भई देउवा नेतृत्वमा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भएपछि श्रेष्ठले लामो समय कार्यबाहक सभापति भएर काम गरेका थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि देउवा जेलमा थिए। राजाले गठन गरेको शाही आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा देउवालाई जेलमा राखेको थियो। त्यो कालखण्डमा श्रेष्ठले देउवाको उत्तराधिकारीको रुपमा पार्टीको मोर्चा सम्हालेका थिए।
१३ औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूहलाई एकगठ बनाएका देउवाका लागि १४ औं महाधिवेशन सहज देखिएको छैन। त्यही बुझेर केन्द्रीय सदस्यसँगको छलफलमा अधिकांशले देउवालाई आफ्नै समूहलाई एकगठ बनाउन सुझाएका छन्। एकगठ बनाउन नसकेमा संस्थापनपक्षमा पहिरो जाने विश्लेषण उनीहरुको थियो।
जानकारहरुका अनुसार श्रेष्ठको अभिव्यक्ति निधि प्रति लक्षित छ। उनले देउवालाई बाइपास गर्ने कुरा नसोच्न निधिलाई सभ्य भाषामा धम्कीपूर्ण चेतावनीका दिएका हुन्। ‘निधिजी अहिले उपसभापति हो। तर म उहाँभन्दा धेरै सिनियर हुँ पार्टीमा,’ उनले भने, ‘मेरो टिमले अगाडि सारेको खण्डमा म सभापति उठ्ने हो। पहिले देउवाले उठ्ने/नउठ्ने भन्ने भन्नुहोला, त्यसपछिको उठ्ने थाहा हुन्छ। तर म पनि सभापतिको उम्मेदवार हुँ।’
देउबाले धेरै पटक ‘हाम्रो टिमको म पछि त तपाई नै हो यार!’ भनेर गोपालमानलाई भन्ने गरेका छन्। त्यहिँ कारणले ढुक्क बसेका गोपालमान अहिले एक्कासी निधिको फुर्तिफार्ती बढेको देख्दा झस्किएका छन्। उनि आफू भन्दा जुनियरलाई कदापी स्वीकार्न नसक्ने स्थितिमा छन्। बरु देउबा नै उठ्नु पर्ने उनको माग छ। गोपालमान र विमलेन्द्र भिड्नुको अर्थ हो- देउबालाई फाइदा। एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नसकेको खण्डमा सहमतिको लागि पनि अन्तिममा देउबालाई नै फेरि एकल उम्मेदवारका रुपमा अगाडी सार्नुको विकल्प रहने छैन।